यी ३ राशिको लागि हुनेछ चाँदी निकै अशुभ, बन्नसक्छ असफलताको कारण.! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी ३ राशिको लागि हुनेछ चाँदी निकै अशुभ, बन्नसक्छ असफलताको कारण.!
यी ३ राशिको लागि हुनेछ चाँदी निकै अशुभ, बन्नसक्छ असफलताको कारण.!
प्राय: मानिसलाई सुन-चाँदीको गहना लगाउने सोख हुन्छ। तर केहि यस्ता मानिस पनि हुन्छन, जो आफ्नो ग्रह दशा का-ट्नको लागि पनि यस्ता आभुषण लगाउने गर्छन्। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार चाँदीको गहनालाई खुशी र समृद्धिको कारक मानिन्छ।
ज्योतिषीय मान्यता अनुसार, चाँदी नौ ग्रहहरूमा शुक्र र चन्द्रमासँग सम्बन्धित छ। यस बाहेक, यो पनि भनिएको छ कि चाँदी भगवान शिवको आँखाबाट उत्पन्न भएको हो र जहाँ चाँदी हुन्छ त्यो स्थानमा सुख, वैभव र समृद्धिको कुनै अभाव छैन।
त्यस्तै ज्योतिषमा भनिएको छ कि चाँदीको गहना लगाउनु सबैको लागि राम्रो हुँदैन। यी ३ राशिका मानिसले चाँदीको गहना लगाउनु शुभ मानिदैन।
यी राशिका मानिसलाई शुभ हुँदैन चाँदी
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मेष, कन्या र धनु राशिका मानिसले चाँदीको गहना प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ। यी राशिका मानिसको लागि चाँदी शुभ हुँदैन। यी राशिका मानिसको लागि चाँदीको गहना दु-र्भाग्यको कारण बन्नसक्छ। ज्योयिषीय मान्यता अनुसार यदि मेष, कन्या वा धनु राशिका मानिसले चाँदी लगाए भने परिवारमा अ-शान्ति र आर्थिक समस्या आउनुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या पनि आउनसक्छ। त्यस्तै यो असफलताको कारण पनि बन्नसक्छ।